Tetikasa Capsud famatsiana herin’aratra Hiezaka handrakotra an’i Madagasikara
Fanohanana ireo sehatra sosialy Ainga ho an’ny toekarena
Navoaka omaly alakamisy 16 mey tetsy amin’ny Hotely Le Pavé Antaninarenina ny voka-pikarohana nataon’ny eo anivon’ny fikambanana Faribolana Mpandinika ny Hary eto Madagasikara (CREM).
Fiarovana ara-tsosialy sy fanomezan-danja ny vehivavy 90 tapitrisa dolara no nomen’ny Banky Iraisam-pirenena
Natao omaly alarobia 15 mey tetsy amin’ny lapam-panjakana Mahazoarivo ny fifanaovan-tsonia fiaraha-miasa fanampiny nataon’ny minisiteran’ny toekarena sy ny fitantanam-bola sy ny tahirim-panampiana ho an’ny fampandrosoana (FID).
Fanampiana ny orinasa madinika sy salantsalany Ilàna vola hatrany amin’ny 35 tapitrisa dolara
Tombanana hatrany amin’ny 125 miliara Ariary ny vola ilaina amin’ny fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salantsalany (PME), hoy ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana, Ramatoa Lantosoa Rakotomalala.
International Fair Tourism Madagascar 8 Hampirisika ny rehetra hisehatra amin’ny fizahantany
Eny amin’ny CCI Ivato indray no hotontosaina ny hetsika International Fair Tourism Madagascar andiany fahavalo amin’ny 13 hatramin’ny 16 jona ho avy izao.
Orinasa misehatra amin’ny asa vaventy sy fanorenana Mikaikaika amin’ny zana-bolan’ny banky
Lafo loatra ny zana-bola alain’ireo banky ka mahafaty antoka nefa tsy maintsy mindram-bola raha te hivelatra, hoy ireo orinasa vaventy, salantsalany ary ireo madinika misehatra amin’ny fanorenana sy ny asa vaventy.
Famatsiam-bolan’ny Vondrona Eoropeanina Ny Malagasy no mahafantatra ny laharam-pahamehany
Mbola ao anatin’ny fanamarihana ny herinandron’i Eoropa ny fihaonana narahina adihevitra mikasika ny banjina ara-toekarena notontosaina tetsy amin’ny Hotely IBIS Ankorondrano omaly alarobia 08 mey.
Fitombon’ny toekaren’i Madagasikara Hampihatra ireo modely fikajiana vaovao ny INSTAT
Nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy omaly alarobia 08 mey tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny fomba fikajiana vaovao ny fitombon’ny harinkarena ankapobeny eto Madagasikara.
Nanomboka nitsangana ara-dalàna tamin’ny taon-dasa ny orinasa Capsud eto Madagasikara izay manana sampana maro maneran-tany. Omaly alarobia 5 desambra ny fampahafantarana tamin’ny fomba ofisialy ny fahavitan’ny tetikasa Kube
niandraiketany nametrahana panneaux solaire miisa 1200 mipetraka ambony tafon’ny fanaovam-baolina anaty efitrano (Futsal) etsy amin’ny Galaxy Andraharo. Manome tanjaka herinaratra hatrany amin’ny 410Kwc ho an’ny trano be kube 4 izany ary mampiasa vatoaratra 1 mega. Tsy mijanona eto an-drenivohitra ity tetikasa ity fa hihitatra hatrany ambanivohitra ary tanjona ny hahazoan’i Madagasikara manontolo ny herinaratra. Amin’izany dia hiezaka hametraka ireo fitaovana famatsiana herinaratra ho amin’ny tany ny tompon’andraikitra fa tsy ambony tafo tahaka ny aty an-drenivohitra. Atsy ho atsy dia ny faritra Ilakaka iray manontolo no hisitraka ny tetikasa izay hamatsiana herinaratra hatrany amin’ny 500 Kwc noho io faritra io mampandroso ny toekarena Malagasy amin’ny alalan’ny fitrandrahana atao any. Mamaha ny olan’ny Malagasy ity tetikasa ity na dia mbola mitodika amin’ireo orinasa matanjaka fotsiny aza aloha izy amin’izao fotoana izao satria iaraha-mahita hatrany ny fisondrotambidin’ny herinaratra avy amin’ny JIRAMA. Tombony ny fahafahana mandoa tsikelikely ny saran’ny famatsiana ataon’izy ireo rehefa avy niantohany tanteraka ny fametrahana ny fitaovana,ny filàna rehetra ka mandray vita sy vonona ny mpanjifa.